Trolleybus | RayHaber | Railway | Highway | telegrama fiara
Araka ny efa fantatra, ny tantaran'ny bibilava dia teny ampiasaina amin'ny lohahevitra tsy afaka mamarana ary mitohy. Fanemorana asa, ajanony ary tongava amin'ny fandaharam-potoana ary fampanantenaana rehefa misy ny tsy fahombiazana. Ny fiandrasan'ny vahoakan'i Şanlıurfa dia mampatsiahy ihany koa amin'ity tantara ity. [More ...]
Ny fiara Malatya Metropolitan Municipal Public Services Services (MOTAS) dia hanome serivisy fitaterana maimaimpoana ho an'ny olom-pirenena mandritra ny Eid al-Adha. 11 - 14 Ny mpivady, namana, havana ary fasana [More ...]
15 - 16 Ireo kandidà izay miditra amin'ny YKS amin'ny volana Jona dia handray soa avy amin'ny fitateram-bahoaka ao amin'ny tanànan'i Metropolitan maimaim-poana amin'ny alalan'ny fampisehoana ny doka fidirana fanadinana. Ny tanànan'i Malatya Metropolitana, ity faran'ny herinandro ity izay hatao ao amin'ny Ivotoerana Fanabeazana momba ny Fampianarana ambony (YKS) dia handray manokana [More ...]
Ny Bus sy ny Trambus ao amin'ny tanànan'i Malatya MOTAŞ dia hanome serivisy maimaim-poana eny amin'ny lalana rehetra manerana an'i Malatya, indrindra amin'ny andro voalohany amin'ny Ramadany. 4-6 June 2019 dia hankalazaina mandritra ny Eid al-Fitr, tsy manana olana ireo olom-pirenena [More ...]
Nihat no ben'ny tanàna Şanlıurfa Çiftçi fe-potoana ao amin'ny Antenimieram-fivoriana farany nanatrika ny orinasa tetikasa Trambus tsy ho vita ara-potoana noho ny fitomboan'ny fifanakalozana ivelany fa hanolotra ny tarmbüs in May, hoy izy. ny tetikasa sy ny foto-drafitrasa ny asa [More ...]
Ny fiarandalamby tranainy tranainy indrindra ao avaratr'i Shina, izay nanamora ny teknolojiam-pitaterana an-dalamby, dia nanomboka ny fizaham-pahafahan'izy ireo tao an-tanànan'i Harbin. Ny Trolley 30 dia afaka maika haingana kokoa amin'ny 70 metatra lava sy ora. Trolley raha oharina amin'ny karazana tranainy, latsaky ny [More ...]
70 tapitrisa hitentina kilao sy ny foto-drafitrasa momba ny fantatra, dia bao, intsony, tokony ho 35 tapitrisa kilao ny fahefana ho an'ny tetikasa tariby TRAMBUS nandany volana 2 fahasoavana fe-potoana mifarana amin'izao fotoana izao ihany koa. Ankehitriny, ny fiheveran'ny vahoaka ny trambuses [More ...]
Nitsidika ny Trambus Maintenance and Repair Center ny ben'ny tanànan'i Malatya Hacı Uğur Polat ary nahazo fampahalalana avy amin'ny lehiben'ny MOTAŞ General Anwar Sadat Tamgacı. Ny fakan-tsary 158 eny an-kianja manondro ny fanarahana ny fiara eo amin'ny tsipika [More ...]
Miasa amin'ny fanamafisana ny fahafaham-po amin'ny mpanjifa ny MOTAŞ dia manohy ny fanadiovana amin'ny antsipiriany sy ny fanadiovana isan'andro amin'ny fiara mba hitondra ny mpandeha amin'ny toerana madio sy madio kokoa. Manompo mpandeha an'arivony isan'andro [More ...]
Tanatin'ny tanànan'i Sanliurfa Metropolitana tao Sanliurfa no nanomboka ny tetikasa Trambus. Ny sefom-panjakan'i Sanliurfa Metropolitan M. Can Hallaç dia nitsidika ny tanànan'i Şanlıurfa Metropolitan, orinasan'ny orinasan'ny Trambus. Ny Sekretera Jeneralin'ny Tale Jeneralin'ny tanànan'i Metropolitan M. Can [More ...]
Minisitry ny indostria sy ny teknolojia Mustafa Varank, Bozankaya AŞ novokarin'i Sileo (Silent) S10 model bus no tao ambadiky ny kodiarana. Ny minisitra Varank, izay mipetraka amin'ny seza kapitenin'ny fiara fitateram-bahoaka amin'ny tontolo iainana, izay misarika ny saina amin'ny maha-trano an-trano azy sy an-tànana azy [More ...]
Nahoana no tsy nanompo an'i Şanlıurfa ny Trambus?
Mba hanamorana ny fitaterana ny tanànan'ny Metropolitan any Sanliurfa, ny Trambus, izay niditra tamin'ny rafitra fitateram-bahoaka, dia tsy naverina naverina indray. 21 dia navotsotra tamin'ny volana Novambra. Ny fanambarana nataon'ny ben'ny tanànan'i Sanliurfa Metropolitan Nihat Ciftci dia nambara ihany koa ny 21 tamin'ny volana Novambra. [More ...]
Sanliurfa fitateram-bahoaka mba mahatsapa rindranasa any an-tsaha ny fakan-tahaka Metropolitan Monisipaly, 4 taona farany ny isa 314 mba hanala ny fiara fitateram-bahoaka isan-karazany maro sy 49 lalana asa sy mitantana Torkia iray amin'ireo tambajotram-pitaterana lehibe indrindra ny olom-pirenena toeram oldu.şanlıurfal [More ...]
Nanomboka tao Sanliurfa ny fizahan-tany Trambus
Tranobe fitiliana trambus tao Sanliurfa dia vita tanteraka. Ny trambus, izay hanompo ao amin'ny tsipika 63 eo anelanelan'ny tsangambato sy Balıklıgöl, dia nahazo marika feno teo amin'ilay fitiliana fitsapana nefa tsy nisy olana. Şanlıurfa Metropolitan Ben'ny tanàna Nihat Çiftçi, tanàna [More ...]
Nihat Ciftci, ben'ny tanànan'i Sanliurfa, renivohitry ny tanànan'i Nihat dia nanokatra ny tranobem-panompoana izay vita tamin'ny Direction de la Direction de la Béninmeire de Metropolitan de Ministre. Tranoben'ny fitaterana napetraky ny tanànan'i Sanliurfa metropolita, trano fananganana serivisy dimampolo metatra tora-droa mirefy metatra tora-droa, fitaterana fiara mpitondra fiara fitateram-bahoaka [More ...]
Mitsahatra ny Tranobe ao Şanlıurfa, Manadino Ireo Olona Tsy Ampy Ireo!
Ny fijanonana ao anatin'ny tetikasa Trolleybus Tetik'asa nataon'ny tontolon'ny Metropolitan Şanlıurfa dia tsy natao ho an'ireo ray aman-dreny manana fahasembanana sy zaza. Nangataka ny hampitsahatra ity fitarainana ity ny kaominina raha vao napetraka ny tetikasa. Nihetsika avy hatrany ny manampahefana. [More ...]
Miasa ao amin'ny Faritra Narlıdere Köprülü
Diyarbakir lalana manasaraka Karaköprü kasaina amin'ny Kaominina mba hahazoana antoka uninterrupted fitaterana toerana eo amin'ny lafiny roa amin'ny tantara 3 Narlıdere Viaduct sy ny asan'ny fifampaherezana dia mandroso amin'ny hafainganam-pandeha feno. Boulevards, vy ary fanafahana fanampiny ao Şanlıurfa [More ...]
Fampindram-bola vaovao momba ny fitaterana an'i Bursa
Event Media mitohy miasa fitsidihana sy Aktas Filoha manome fanazavana manan-danja momba ny tetikasa dia hatao ao fiainam-baovao, nanasongadina fa manan-danja izy ireo dia hanao fampiasam-bola amin'ny fitaterana Bursa Metropolitan Alinur Aktas ben'ny tanàna, ary ny mpitantana nitsidika ny Event Media [More ...]
Ny lalana Trambus dia mitodika any Şanlıurfa
Tamin'ny taona 5 farany, ny tanànan'ny Metropolitan, izay nametraka ny tetikasa Trambus mba handresena ny olana momba ny fitaterana amin'izao fotoana izao tao Şanlıurfa, dia nihena ny isan'ny mponina nihaona tamin'ny 25 isan-jato. Ny dingana voalohany napetraka ho an'ny Trambus Project, izay manohana tanteraka ny olom-pirenena [More ...]
National sy National TCV Trambüslerimiz
Hery ho an'ny faritra tsy mihantona herinaratra katana rafitra manaraka ny lalana, herinaratra ao amin'ny toerana izay tsy misy tsipika izay azo voampanga ho bateria rafitra, lalamby rafitra noho ny manana vatana mpandeha fahafahana dia avo, ny lalamby rafitra foto-drafitr'asa fandaniana ambany ary tsy misy fepetra ny foto-drafitrasa [More ...]